व्यवसायका लागि ब्लगिंग: पुराना कुकुरहरूका लागि नयाँ तरिकाहरू Martech Zone
व्यवसायका लागि ब्लगिंग: पुराना कुकुरहरूका लागि नयाँ तरिकाहरू
बिहीबार, जुलाई 24, 2008 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
कुनै पनि निरपेक्ष बहस गर्न सक्दैन ब्लगको प्रभुत्व लोकप्रियता मा र, फलस्वरूप, खोज इञ्जिन श्रेणीकरण। ब्लगको लोकप्रियता वेबमा विकसित भएको संचारको यो नयाँ विधिबाट आउँदछ - अधिक व्यक्ति, कम परिष्कृत र वास्तविक।
टेक्नोराटी ट्र्याक गर्दै छ 112.8 XNUMX२.। मिलियन ब्लगहरू यस घडीमा हजारौं ब्ल्गहरू सिर्जना भईरहेको छ। खुला स्रोत अनुप्रयोगहरू जस्तै WordPress, ब्लगरवा टाइपपेड र भोक्स ब्लगिंग सजिलो बनाउनुहोस्। प्रत्येक कम्पनीमा, यदि हरेक आईटी विभाग होईन भने, तपाईंले कम्तिमा एउटा व्यक्ति ब्लगिging भेट्टाउनुहुनेछ। यो सरल छ:
लेख + प्रकाशित = ब्लग?
सजिलो लाग्दछ, हैन? मार्केटिंग परामर्शदातालाई व्यवहार गर्ने सही तरिका यही हो जब हामी संस्थामा प्रवेश गर्छौं र समग्र विपणन रणनीतिहरूको एक अंशको रूपमा ब्लगिgingको बारेमा छलफल गर्छौं। कम्पनीहरूले ब्लगि discussको बारेमा छलफल गर्दछ जुन यो २०० check चेकलिस्टमा एक वस्तु हो। कम्पनीलाई सोध्नुहोस् यदि उनीहरू ब्लग गर्छन् र तपाईले "yup" अनिवार्य पाउनु पर्छ। यदि तिनीहरूसँग छैन भने, उनीहरूलाई सोध्नुहोस् कि कुन प्लेटफर्ममा उनीहरू हेरेका छन् र तिनीहरू कुनै पनि "निःशुल्क व्यक्तिहरू" सँग जवाफ दिन्छन्।
यो सजिलो छैन
यदि कर्पोरेट ब्लगिंग यति सरल थियो, किन ब्लगको संख्या पल्मेट गर्दै छन्? त्यहाँ केही कारणहरू छन्:
सुस्त कुराकानीले पाठकहरूलाई आकर्षित गरिरहेको छैन।
ब्यापार ब्लगहरु रेगर्गेटेड प्रेस विज्ञप्तिमा परिणत हुन्छ।
शीर्षकहरूले टिप्पणी वा ट्र्याकब्याकहरू स्पार्क गर्दैन।
पोष्टहरूमा व्यक्तित्व र सोच नेतृत्वको कमी छ।
संक्षिप्तमा, किन व्यवसाय ब्ल्ग असफल हुनुको कारण हो किनभने निगमहरूले उनीहरूको सामग्री व्यवस्थापन प्रणालीको लागि ब्लगि blog अनुप्रयोग प्रतिस्थापन गरिरहेका छन्।
व्यवसायलाई मद्दत चाहिन्छ!
सफल ब्लगिंगका लागि दुई कुञ्जीहरू छन् जुन व्यवसायले पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्दछ:
एक प्लेटफर्म जसले रणनीतिलाई समर्थन गर्दछ।
कुनै आईटी केटाको भावनाको औंसको साथ सर्वरमा वर्डप्रेस फ्याँक्न सक्छ र सीईओलाई लगइनको साथ प्रदान गर्न सक्छ। यो तपाइँको व्यवसाय ब्लग छोटो जीवन को सुनिश्चित गर्न एक निश्चित आगो तरीका हो। यो धेरै बाहिर जान र लन्केयर व्यवसाय सुरू गर्नु जत्तिकै हो किनकि तपाईं आफैले कसरी लन्नेमवर सुरु गर्ने भनेर सोच्नुभयो।
प्राधिकरण र खोज इञ्जिन परिणामहरू प्राप्त गर्न तपाईंको व्यवसायको एक धेरै गहन विश्लेषणको आवश्यक पर्दछ, यसको प्रतिस्पर्धीहरू, यसको वेब उपस्थिति हाल र जहाँ तपाईं यो चाहानुहुन्छ।
ब्लगि platform प्लेटफर्म लागू गर्दै जुन पोष्टिंग प्रक्रियाको माध्यमबाट ब्लगरलाई सहजै मार्गनिर्देशन गर्दछ, प्राविधिक अयोग्य लेखकलाई अनुकूलित सामग्री उत्पादन गर्न मद्दत गर्दछ, र त्यसपछि स्वचालित रूपमा अधिकतम खोज परिणामहरूको लागि सामग्री व्यवस्थित गर्दछ (पहिलेको विश्लेषण र रणनीतिमा निर्णय गरिएको) व्यवसाय ब्लगको सफलताको कुञ्जी हो।
ब्लगिंग एक रातको सफलता छैन। उत्कृष्ट ब्लगिंग परिणामलाई गति र स्थिर विश्लेषण र सुधारको आवश्यक पर्दछ। व्यापार ब्लगिंग को साथ, म एक टीम दृष्टिकोण को प्रोत्साहित पनि गर्छु जहाँ टोली मान्छेहरु को एक व्यापक रणनीति र तालिका मा कार्यान्वयन गर्दै छन् सुनिश्चित गर्दछ।
सामग्री मार्केटिंग द्वारा संचालित वा अनुमोदित छैन। यदि त्यहाँ छ भने ढिलो कुराकानी हुनु पर्ने, यो प्राय जसो कारणले हुन्छ सफाई ठूला भाई द्वारा सामग्री को।
रणनीति + लेख + प्रकाशित + अनुकूलन = व्यवसाय ब्लग!
मलाई WordPress मनपर्दछ र यो ब्लग त्यो ब्लगिंग प्लेटफर्मबाट परिवर्तन हुनेछैन। यद्यपि यसको मतलब यो होइन कि वर्डप्रेस आदर्श समाधान हो। मेरो 'नयाँ पोस्ट सिर्जना गर्नुहोस्' स्क्रिनमा १०० विकल्पहरू भन्दा कम छैन ... ट्याग, कोटीहरू, स्थिति, अंश, ट्र्याकब्याक, टिप्पणीहरू, पिंगहरू, पासवर्ड सुरक्षा, कस्टम फिल्डहरू, पोष्ट स्थिति, भविष्यका पोस्टहरू ...। लामो सास यो स्क्रिन कसैको पनि अगाडि फ्याक गर्नुहोस् र यो अलि डरलाग्दो छ!
तपाईंको व्यवसायले कसरी ब्लगि platform प्लेटफर्म प्रयोग गर्ने भनेर प्रयोगकर्ताहरूलाई शिक्षित गर्नु पर्दैन। तपाईं साच्चिकै लगईन गर्न, पोष्ट गर्न र प्रकाशित गर्न सक्षम हुनुपर्दछ। अनुप्रयोगलाई बाँकी काम गर्न दिनुहोस्!
यहाँ तपाईंले पाउनुहुने शानदार सुविधाहरूको एउटा उदाहरण यहाँ छ कम्पेन्डियम ब्लगवेयर, लेखकलाई उनको पोष्ट भित्र खोजशब्दहरू र वाक्यांशहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न मद्दत गर्ने एक उपकरण जसले गर्दा यसलाई खोज इञ्जिनहरूले छनौट गर्न सक्ने सामर्थ्य हुन्छ।
यदि तपाईं धेरै धेरै वा धेरै धेरै कुञ्जी शब्द र वाक्यांशहरू लेख्नुहुन्छ भने, तपाईंको स्कोर खस्नेछ! यो साथी, पीजे हिन्टन द्वारा लेखिएको एक आकर्षक सानो उपकरण हो। लेखकहरूलाई पाठकका लागि लेख्न सल्लाह दिइन्छ, तर तिनीहरू त्यो प्राप्त गर्न सक्दछन् र महान कुञ्जी शब्द घनत्व यस जस्तो एक सहज उपकरणको साथ।
कम्पेन्डियम जस्ता उपकरण पेशेवरहरूको टोलीको साथ आउँदछ जुन तपाईंलाई रणनीति बनाउन सहयोग गर्दछ, र एक अनुप्रयोग जसले तपाईंलाई रणनीतिमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न मद्दत गर्दछ। र तपाईको आईटी व्यक्ति पनि समावेश हुन आवश्यक छैन! यदि तपाइँ तपाइँको व्यवसाय ब्लग ट्यूबहरु तल जान चाहानु हुन्न भने, सहि व्यक्ति खोज्नुहोस् र कार्यान्वयन गर्न सही उपकरण पाउनुहोस्।
मलाई आज बिहान क्रिस बगगटसँग कफि भ्रमणको आनन्द लाग्यो (उनले पनि ब्लगि onमा फोरेस्टर अनुसन्धानको बारेमा पोष्ट गरे।
कम्पेन्डियम is कार्य गर्दै - ध्यान केन्द्रित गर्ने र व्यवसायका लागि दर्ता गर्ने ट्राफिक धेरै जो साईन अप गर्दै छन्। पाठकहरू स engaged्लग्न छन् र फर्केका छन् - र परिणाम परिणामहरूबाट व्यवसायहरू बढ्दै छन्। यो कम्पनीको लागि रमाईलो समय हो र कम्पेन्डियमको प्रचलनहरू फोररेस्टरले अवलोकन गरेका ती प्रवृतिहरूको बिपरित पूर्ण विपरित हुन्छन्।
पूर्ण प्रकटीकरण: म कम्पेन्डियममा सेयरधारक हुँ र शुरुको दिनमा क्रिस र अलीसँग काम गरें। कम्पेन्डियम एक सिद्धान्त र ह्वाइटबोर्ड कुराकानी पछाडि फिर्ता थियो, तर क्रिस र टीमले त्यो कुराकानीलाई धेरै कम्पनीमा परिणत गरेका छन्! यो अब एक सिद्धान्त होईन, यो एक अनुप्रयोग हो जुन व्यवसाय ब्लगि transलाई रूपान्तरण गर्दैछ।
टैग: व्यवसाय को लागी ब्लगिंगकर्पोरेट ब्लगिटेक्नोराटी
किन प्रत्येक पाठ्यक्रममा नेटवर्कि isn't छैन?
उपयोगिता र डिजाइनमा मास्टरपिस: वनहब
उत्कृष्ट पोष्ट, डग।
व्यवसाय ब्लगहरु ड्रप हुन सक्छ किनभने प्रारम्भिक अपहरणकर्ताहरूले कहिले पनि ब्लग पाठकहरुलाई ग्राहकहरुमा कसरी रूपान्तरण गर्ने भनेर सिकेन, धेरै जसो वेबसाइटहरूमा सामान्य समस्या हो। अब, तिनीहरू बिभिन्न उपकरणहरू प्रयोग गर्दैछन्।
मलाई लाग्दैन कि व्यवसाय ब्लगिंग वास्तवमै अहिले सम्म परीक्षण गरिएको छ, कम्तिमा धेरै कम्पनीहरूले यसलाई सफल हुने सम्भावना पाउँदैनन्। त्यो किनभने अनुपालन त्यस्तो समस्या हो।
अनुपालन समस्याहरूले ब्लगिgingबाट धेरै राम्रो कम्पनीहरू राख्दछ। सार्वजनिक कम्पनीहरु धेरै लगानी बयान गर्न को लागी सावधान हुनु पर्छ जसले लगानीकर्ताहरुलाई उनीहरुको स्टक किन्न उत्साह दिन्छ। दूरदर्शीहरूको नेतृत्वमा निजी कम्पनीहरू (सम्भावित उत्तम ब्लगरहरू) प्रतिस्पर्धीहरूसँग उनीहरूको विचार प्रक्रिया साझा गर्न उत्सुक छैनन्।
त्यसोभए, को बाँकी छ? लोक र मिड-टायर कम्पनीहरूको मार्केटिंग जुन सार्वजनिकमा जानको लागि पर्याप्त छैन वा विश्व परिवर्तन गर्नको लागि पर्याप्त दर्शनको रूपमा छ। थोरैड्स बोरि blo ब्लग कम्पनीको जमानत र प्रेस विज्ञप्ति भरिएको।
उत्तर? ठिक छ, म अझै कि काम गर्दै छु। सही व्यक्तिलाई ब्लगमा प्राप्त गर्न सजिलो छैन। तर एकचोटि तिनीहरूले सुरु गरे, यहाँ व्यावसाय ब्लगर्सलाई आगो जलाएर राख्नको लागि केही सुझावहरू छन्:
१) केही मद्दत लिनुहोस्। सीईओ तपाईले चाहेको व्यक्ति ब्ल्यागको बाइलाइनमा हुन सक्छन, तर उसले यसलाई प्राथमिकतामा राख्ने सम्भावना छैन। पोष्टहरू लेखिएको र अपलोड गरिएको निश्चित पक्का गर्नको लागि कसैलाई राख्नुहोस्।
२) सम्पादकीय क्यालेन्डर सिर्जना गर्नुहोस्। तपाईं के बारे अगाडि कुरा गर्न लाग्नु हुन्छ निर्धारण गर्नुहोस्, यसलाई कानुनी टोलीको पछाडि चलाउनुहोस् र त्यसपछि तपाईंको लेखकहरूलाई पोष्टहरूमा काम गर्न लगाउनुहोस्।
)) तपाईको ग्राहकलाई चाहिएको कुरा लेख्नुहोस्। बोरिंग पाठकको दिमागमा हुन्छ (वा हेर्नेको आँखा, वा केही चीज)। यदि ब्लग कम्पनीको सम्भावनाहरूमा वास्तविक मूल्य थप्नको उद्देश्य हो भने, पाठकहरूलाई ग्राहकहरूमा रूपान्तरण गर्न यो सजिलो हुनेछ।
एक महान पोष्टको लागि फेरि धन्यवाद।
धन्यवाद रिक! उत्कृष्ट सल्लाह। यसमा समय लिनु भएकोमा धन्यबाद - यो ह्वाइटपेपरको लायक हुन सक्छ, ए?
जुलाई १,, २०१ at १::25२ अपराह्न
उत्तम पोष्ट, सामान्य जस्तो।
तर म सोध्न चाहान्छु, तपाईंले हाइलाइड गर्नुभएको कम्पेन्डियमको सुविधा सिक्ने बारेमा कसरी आयो? के तपाईको ग्राहक यो प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ? वा यो पोष्ट कम्पेन्डियम द्वारा प्रायोजित गरिएको थियो? यो वास्तव मा एक वाणिज्य जस्तै को पार भयो।
सचेत रहनुहोस् मँ तपाईलाई आरोप लगाइरहेको छैन, र यो एक पोस्ट को लागि भुक्तान भएको भए पनि म तपाईलाई धेरै सोचें, तर म एकदमै उत्सुक छु ...
त्यहाँ चिन्ता छैन! मैले पोष्टको अन्त्यमा केहि खुलासा प्रदान गरें - मैले क्रिस बगगटको साथ कम्पेन्डियमको मूल आधार विकास गर्न मद्दत गरें र म व्यापारमा साझेदार हुँ।
पीजे हिन्टन कम्पेन्डियमका विकासकर्ता हुन् र (यो संयोग हो) पनि सँगी 'फिएन्ड' बीन कप जहाँ मँ ह्या out आउट गर्दछु। म पीजेसँग कुरा गर्दै थिएँ कि उनले लेखेका जस्तै ब्ल्गरलाई लेख्न मद्दतको लागि केहि विचारहरू - र पीजेले मलाई यस सुविधाको अन्तर्दृष्टि प्रदान गरे जुन अहिलेसम्म रिलीज भएको थिएन।
अली बिक्री विचार संग आयो र म यो शानदार हो लाग्छ।
दोह! केही कारणहरूले गर्दा मैले "पूर्ण प्रकटीकरण" भाग देखिन, मैले यसलाई मेरो आरएसएस पाठकमा पढें र कुनै तरिकाले त्यो याद गरें। अघिल्लो पोष्टको लागि माफ गर्नुहोस्।
कुनै समस्या छैन, माइक! म तपाईसँग सँधै खुला रहन्छु - र चुनौती भएकोमा सराहना गर्दछु। मलाई लाग्छ यो ब्लगरको रूपमा 'मेरो कर्तव्य' हो। यदि म शब्दहरू लेख्न गइरहेको छु भने, म तिनीहरूलाई राम्रोसँग ब्याक अप गर्न सक्षम हुनेछु!
जुलाई १,, २०१ at १::31२ अपराह्न
कम्पनीका लागि अधिक व्यक्ति सम्म पुग्न ब्लगिging्ग एक उत्तम तरीका हो। यसले कम्पनीलाई उनीहरूको व्यवसायको फरक पक्ष देखाउन अनुमति दिन्छ। थप रूपमा, यसले खोज इञ्जिनमा तिनीहरूको स्तर बढाउन मद्दत गर्दछ। किनकि ब्लगि your राम्रो तरीका हो तपाईंको ग्राहकहरु संग कनेक्ट गर्न र तपाइँको सामाजिक नेटवर्क विस्तार गर्न को लागी, तपाइँ सावधान र आफ्नो ब्लगिंग संग लगातार हुनु पर्छ।